गुणस्तरीय तथा व्यावहारिक शिक्षाको नमुना « Loktantrapost
गुणस्तरीय तथा व्यावहारिक शिक्षाको नमुना
४ बैशाख २०७४, सोमबार १६:३०
गाउँमा रहेर गुणस्तरीय शिक्षा दिने उद्देश्यका साथ २०६३ सालमा स्थापना भएको थेसीस अङ्ग्रेजी माध्यमिक स्कुल बडाखालले १० औँ बसन्त पुरा गरेको छ । १० वर्षको अन्तरालमा विद्यालयले थुप्रै प्रगति र उन्नति गर्न सफल बनेको छ । स्थापनाको समयमै कक्षा ५ सम्मको कक्षा सञ्चालन गरेको विद्यालयले हरेक वर्ष कक्षा अपग्रेट गर्दै गयो । जसको परिणाम स्वरुप २०७१ सालमा कक्षा १० को अनुमति पाएको थियो ।
अभिभावकको साथ र सहयोग, शिक्षक परिवारको लगनशीलता र नेतृत्व अनि प्रशासनको कुशल व्यवस्थापनका कारण नै विद्यालयलाई सफलता मिलेको छ । सामान्य कक्षा कोठामा पढाइ सुरु गरेको विद्यालयले हाल आएर सुविधा सम्पन्न कक्षा कोठा निर्माण गर्न सफल भएको छ । शान्त, स्वच्छ र रमणीय वातावरण रहेको विद्यालयप्रति अभिभावकको विश्वास समेत भरपुर बढेकोे छ ।
‘अभिभावकक र विद्यालयको सहभागिता, शिक्षकको लगनशीलता र नेतृत्व अनि विद्यालय प्रशासनको कुशल व्यवस्थापन’ भन्ने नारा बोकेको विद्यालयले पढाइसँगसँगै अतिरिक्त क्रियाकलापमा समेत उत्तिकै अब्बल रहँदै आएको छ ।
यस क्षेत्रका बालबालिकाले बोर्डिङ पढ्नका लागि टाढा जान नपारोस् भन्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको विद्यालयले छोटो समयमा पाएको सफलताले यस क्षेत्रका अभिभावकहरुमा पनि खुसीयाली छाएको छ ।
३५ जना विद्यार्थीबाट सुरु गरिको विद्यालयमा हाल २ सय ६० जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । आधुनिक प्रविधियुक्त शिक्षामा जोड दिने गरेको विद्यालयले नानीहरुको हरेक प्रतिभाको पहिचान गर्ने र प्रतिभा अनुसारको प्रतियोगितामा सहभागिता गराउँदै आएको छ । फुटबल, व्रिmकेट, भलिवल, चेस, दौड, हाजिरीजबाफ, ब्याटमिन्टन, नृत्य तथा गायन क्षेत्रमा विद्यार्थीहरुलाई सहभागिता गराउँदै आएको छ ।
‘हामी विद्यार्थीको भविष्यप्रति सधैँ सचेत छौँ’ विद्यालयका संस्थापक प्रिन्सिपल डम्बर रुचाल बताउनुहुन्छ–‘हाम्रो लक्ष्य नै नानीहरुको भविष्य निर्माण गर्ने भएकाले जसरी हुन्छ नयाँ सोच र प्रविधिको प्रयोग गरेर भए पनि उनीहरुलाई सक्षम र दक्ष बनाउने हाम्रो लक्ष्य हुनेछ ।’
सुरुमा रोजिएट ब्राइट इन्स्च्युटको नाममा सञ्चालन गरिए पनि पछि गएर थेसीस सेकेण्डरी स्कुलका रुपमा सञ्चालन गर्न थालिएको हो । १८ जना शिक्षक तथा कर्मचारी स्टाफ रहेको विद्यालयमा हरेक शिक्षक दक्ष र तालिम प्राप्त रहेका छन् ।
अहिले नयाँ भर्ना खुलेको छ । नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि अभिभावक, विद्यार्थी आइरहने हुनाले म उनीहरुसँग परामर्शमै व्यस्त छु । साथै म प्याव्सनको क्षेत्रीय संयोजक भएको नाताले पनि संंस्थागत कामहरुमा इङ्गेज हुने गरेको छु ।
नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ ? विद्यार्थीको आगमन कस्तो छ ?
–हामी क्वान्टीटीभन्दा क्वालिटिमा ध्यान दिन्छौँ । ‘स्वस्थ शिक्षा हाम्रो अभियान’ अनि ‘वेल डन इज बेटर देन वेल सैड’ हाम्रो शैक्षिक श्रम सिद्धान्त रहेको छ । विद्यार्थी कति छन् भन्दा पनि भएका विद्यार्थीलाई कस्तो बनाउने भन्ने हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो । जति विद्यालयमा भर्ना हुन्छन् उनीहरुलाई राम्रो शिक्षा दिनु हाम्रो काम हो । त्यसैले पनि अभिभावकहरुको विश्वास हामीमा बढेको हो ।
१० वर्षको अन्तरालमा कस्तो अनुभव गर्नु भयो ?
– सुरुमा यस क्षेत्रमा विद्यालय सञ्चालन गर्न गाह्रो छ । यहाँ विद्यार्थी हुँदैनन् । बोडिङ सञ्चालन गर्न गाह्रो पर्छ भन्ने गरिन्थ्यो । तर, मैले त्यसको कुनै प्रभाह नगरी विद्यालय सञ्चलन गर्न लागे । आज तिनै अभिभावहकरुले हामीलाई विश्वास गरेर नानीहरु पठाउनु भएको छ । यो हाम्रो सफलता हो । हामीले सधैँ विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिएर एउटा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भयौँ जस्तो लाग्छ ।
विद्यालयका सुविधा र विशेषताहरु के के छन् ?
अत्यन्तै महत्वपूर्ण प्रश्न । कुनै पनि विद्यालयको पहिचान भनेको त्यहाँको सेवा सुविधा र बिशेषता हो । हामीले सकेसम्म विद्यालयमा धेरै सुविधा दिने प्रयास गरेका छौँ । जुन निम्न अनुसार छन् ।
– दक्ष, योग्य तथा तालिम प्राप्त शिक्षकहरुबाट अध्ययापन
–पोजेक्ट बेस शिक्षण बिधि
– विद्यार्थीहरूका लागि सानै कक्षादेखि कम्प्युटर शिक्षा
–नियमिति गायन तथा नृत्य प्रशिक्षकबाट प्रशिक्षण गराइने
–पूर्ण रुपमा अङ्ग्रेजी वातावरणमा अध्यापन
–विद्यालय परिसरभित्र चमेना गृहको व्यवस्था
–स्कुल बसको व्यवस्था
–खेलकुदतर्फ भलिबल, फुटबल, व्रिmकेटका प्रशिक्षकद्धारा प्रशिक्षण गराइने
–विद्यार्थीको चौतर्फी विकासका लागि उनीहरूकै चाहना अनुसार अतिरिक्त व्रिmयाकलाप सञ्चालन
–प्रयाप्त भौतिक पूर्वाधार
–मन्टेश्वरी विधिबाट बालबालिकाहरुलाई पढाइने
–बालमैत्री वातावरणमा शिक्षण गरिने
–होस्टल सुविधा भएको
– निःशुल्क एवम् सशुल्क कोचिङ्गको व्यवस्था
–बिहानी र दिवा दुवै सत्रमा कक्षा सञ्चालन
–मार्सल आर्ट, स्काउट, प्यारेडका तालिम दिने
–अतिरिक्त व्रिmयाकलाप अन्तरगत कला, साहित्यतर्फका विधाहरुमा निरन्तर अभ्यास र प्रतियोगिता सञ्चालन गरिने
–विद्यार्थीहरूमा नेतृत्व गर्ने क्षमता विकासका लागि वक्तृत्वकला, उद्घोषण तालिम, हाजिरीजबाफ, विद्यार्थीको बाल क्लब
– नियमित साप्ताहिक, त्रैमासिक र अन्य परीक्षा सञ्चालन
–विविध शैक्षिक अवलोकन भ्रमण
–साप्ताहिक खेलकुद तथा मनोरञ्जनको व्यवस्था
–थेसीस स्कुललाई एउटा शैक्षिक गन्तव्यको रुपमा स्थापित गर्दै उत्कृष्ट विद्यालय बनाउने
–व्यवसायिक तथा प्राविधिक विषयमा विद्यालय स्तरबाटै सृजना गर्न जोड दिने
–यसै क्षेत्रमा प्राबिधिक शिक्षा दिने गरी कक्षा ११ र १२ हुँदै उच्च शिक्षा दिने गरी जनशक्ति उत्पादन गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो ।
– भोकल ÷ गायन प्रशिक्षण कला
–नृत्य प्रशिक्षण कक्षा सञ्चालन गरिएको छ । जसमा अभिभावकले आफ्नो छोरी वा छोरालाई विशेष प्रशिक्षण दिन चहानुहुन्छ भने न्यूनतम शुल्क तिरेर योग्य बनाउन सक्नुहुन्छ ।
प्रोजेक्ट वर्क विधिबाट शिक्षण क्रियाकलाप गरिने भएकाले विद्यार्थीको व्यवहारिक परिवर्तन गराउन जोड गरिन्छ ।
तपाईको शिक्षण पेशा र नेपालको शैक्षिक नीति बारे के भन्न चाहनुहुन्छ ?
म जब एसएलसी २०५४ सालमा गरेपछि सामुदायिक विद्यालयले मलाई शिक्षण पेशामा लाग्ने अवसर दिन खोज्यो । तर, त्यहाँभित्रका बेमेलका कारण मेरो निर्णय हुन सकेन । र, म अवसरको खोजीमा लाग्दा लाग्दै संस्थागत विद्यालयको शिक्षण पेशामा लागे । शिक्षण पेशा गर्ने क्रममा कहिले शिक्षक भएर त कहिले प्रशासक भएर झापादेखि इलामसम्मको धेरै स्कूलहरुमा अध्यापन गरेँ । विंसं. २०६० पछि आफ्नै जन्मभूमि बाहुनडाँगी वडा नं.–३ वडाखालमा थेसीस इङ्लिस स्कूल स्थापना गरी संस्थापक प्रिन्सिपलका रुपमा कार्यरत छु । यसरी लामो समय शिक्षण पेशामा रहँदा र विद्यालय व्यवस्थापन गरिरहँदा राज्यले ल्याएका कतिपय ऐनहरु विभेदकारी देखिन्छन् । विद्यालय सुधार योजनाहरु ल्याउने नाममा आफैंले जन्माएको सन्तान संस्थागत विद्यालयलाई अप्ठ्यारो पार्ने खाले ऐन राजनीतिक नेतृत्वले ल्याउँदा जन्मन सक्ने शैक्षिक द्वन्द्व र सामाजिक द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न कठिन देखिन्छ । यसर्थ सबै खाले शैक्षिक संस्थाहरुलाई श्रम र व्यवस्थापन क्षमता अनि जनशक्ति उत्पादनको आधारमा चल्न सक्ने गरी ऐन बनेको खण्डमा हामी जस्ता युवाहरु निराश हुनुपर्ने थिएन । हामी छिट्टै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी भारत, चाइना, अमेरिका, सिंगापुर जस्ता राष्ट्रहरुको तुलनामा शैक्षिकस्तर पुर्याउन सक्ने थियौँ । त्यसैले राज्य र राजनीतिक दल तथा सरोकार संघसंगठनहरुले बेलैमा संस्थागत विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ । र, न्यायोचित ऐन ल्याउनुपर्छ ।
समग्र संस्थागत बिद्यालय मात्र होइन सामुदायिक बिद्यालयहरुको बारेमा राजनीतिक अवरोध र प्रपोगाण्डहरु फैलने गरेको छ । यो गलत छ । शैक्षिक क्षेत्र नितान्त स्वतन्त्र रहनुपर्छ ।
निजी संस्थाहरुले दिने शिक्षा र आर्थिक व्यवस्थापन सुबिधाको आधारमा हुने भएकोले अनावश्यक राजनीतिकरण गर्ने भन्दा सम्बन्धित निकायले नियमन गर्ने बाहेक हस्तक्षेप बन्द गर्नु पर्छ । बिद्यार्थीको सबै समय सकेसम्म बिद्यालयमा बित्नुपर्ने आजको आवश्यक्ता हो । आज हाम्रा बिद्यार्थीहरुलाई लगानी गर्न नसके व्यवहारिक र जीवन निर्वाह गर्नसक्ने खाले शिक्षा लिन दिन सकिन्न ।
टाढाको विद्यालय धाउन बाध्य यस क्षेत्रका बालबालिकाका लागि आफ्नै क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन हामी निरन्तर लागि परेका छौँ ।
जस्तैः विगतमा रेशु लिम्बेल जो कमजोर विद्यार्थीको रुपमा कक्षा–२ मा एडमिसन गरिएको थियो । २०७२ सालको एसएलसी परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क ल्याई ‘स्टुडेन्ट अफ द इयर’ हुन सफल भइन् । त्यस्तै रिदेश सुनुवार जसले ५÷६ वटा विषयमा फेल गरेका कारण कक्षा ९ छाडी थेसीसमा फेरि ९ बाट सुरु गर्दा ऐ. गण्ति जस्तो विषय राखी उत्कृष्ट अङ्कका साथ २०७२ सालको एसएलसी उत्तीर्ण गरेका छन् । त्यस्तै रोमन मेचे जस्ता विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य कोर्न विद्यालय सफल भइसकेको छ ।